Wararkii ugu dambeeyay xaaladda Cadaado iyo xiisada siyaasadeed ee ka taagan maamulka Galmudug – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Wararkii ugu dambeeyay xaaladda Cadaado iyo xiisada siyaasadeed ee ka taagan maamulka Galmudug
Wararka naga soo gaaraya magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in halkaasi uu weli ka soconayo dadaal kala duwan oo ku saabsan xal u helida xiisadda siyaasadeed ee ka taagan maamulka Galmudug.
Odayaasha ku dhaqan magaalada Cadaado ayaa haatan dadaal ugu jira inaan wax dagaal ama iska hor-imaad ah ka dhicin magaaladaasi, kadib isku dhiciii shalay dhex maray ciidamada NISA iyo kuwa booliska maamulka Galmudug.
Sidoo kale, waxaa magaalada Cadaado haatan ka socda ololihii xooganaa oo ay wadeen xildhibaanadii xilka ka qaaday madaxweyne C/kariin Xuseen Guuleed, kuwaas oo ku howlan sidii ay u abaabuli lahaayeen doorasho lagu qabto magaaladaasi, si loo doorto madaxweyne cusub.
Wasiiru dowlaha wasaarada arrimaha gudaha ee maamulka Galmudug Cumar Maxamed Diiriye Guureeye oo saxaafadda kula hadlay magaalada Cadaado ayaa sheegay inay si aad uga xun yihiin iska hor-imaadkii shalay ka dhacay magaaladaasi, islamarkaana ay haatan wadaan baaritaan ku aadan sidii ay wax u dhaceen.
Dhinaca kale, wafdi uu hogaaminayo madaxweyne C/kariin Xuseen Guuleed ayaa lagu wadaa inay soo gaaraan magaalada Cadaado, iyadoo ay la socdaan siyaasiyiin iyo waxgarad maamulkaasi taageera.
Siyaasiyiinta iyo waxgaradka la socda madaxweyne Guuleed ayaa ah kuwa doonaya in xildhibaanada maamulka Galmudug ee kacdoonka wada ay xal u helaan, iyadoona xidhibaanadaasi ay weli adkeysanayaan in maalmaha soo socdo ay madaxweyne cusub u dooran doonaan maamulkaas.